Dictionary | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ဒီကောင်လေး ထဲမှာ ကိုယ် လေ့လာ ချင်တဲ့ စာလုံးတွေကို အလွယ် တကူ ရှာဖွေနိုင် ပါတယ်..။ ဒါ့အပြင် စာလုံး အသစ်တွေ ထပ်င်္မထည့် ထားလို့ လည်း ရပါသေးတယ်။
အင်္ဂလိပ် စကားပြော လေးတွေ ကိုလည်း လေ့လာနိုင် ပါသေးတယ်။ တော်တော်လေး စုံစုံလင်လင် အသုံးပြု နိုင်မှာဖြစ်လို့ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ apk လေး တစ်ခုပါပဲ။
လိုချင်သူများ အောက်က လင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါ ပြီ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, May 16, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Dictionary, Phone Application
Longman Dictionary of Contemporary English5- Audio Edition v1.4
ဒီတစ်ခါ ကျနော် ပြန်လည် မျှဝေချင် တာလေး ကတော့ Android user တွေ အတွက် ဖုန်းနဲ့ Tablet
တွေမှာ အသုံးပြု ဖို့ Dictionary ကောင်းကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။
Longman ဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာ OS မှာ လူကြိုက်များတဲ့ အားလုံးထဲက နံပါတ်ဝမ်း Dictionary
ဆိုတာကို အားလုံး သိကြမှာပါ။
ကွန်ပျူတာသုံး Dictionary တွေ ထဲမှာတော့ ကျနော် အကြိုက်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Apk လေးထဲ
မှာလည်း စကား လုံးပေါင်း 230,000 လောက် ပါဝင် ပါတယ်။ ရိုးရိုးလေး ပြောရ ရင်တော့ အင်္ဂ
လိပ်စာကို လိုက်စား နေကြတဲ့ ညီအကို တွေနဲ့ ကျောင်းသား / သူများ အတွက် ဒီ ဆော့ဝဲလေး
ဟာ the most up - to-date learner's dictionary လေးဖြစ်လို့ သင့် အတွက် fluency English
Skill ကို လုံးဝ ပိုင်ဆိုင် စေမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မီးနင်း တစ်လုံးစီရဲ့ အဓိပါယ်ကို ဖေါ်ပြ ပေးရာ၌ definitions အားဖြင့် အနည်းဆုံး 2,000 အသုံး
ပြု ပေးထား တာကိုက ပြည့်စုံ လွန်းလှ ပါတယ်။ pronunciations ဆိုင်ရာ အတွက် British and
American English ကို Audio ဖြင့် 77,000 ကျော် ထည့်သွင်းပေး ထားပါ သေးတယ်။
အဲဒီ Audio ရဲ့ စကားလုံး တွေရဲ့ အဓိပါယ် ကိုလည်း example sentences အနေဖြင့် 86,000
recorded ဖြင့် ရေးဆွဲ ထားသေး တာမို့ သင့် အတွက် စိတ်ကူးမလွဲ စေချင်တဲ့ အားလုံး ထဲက
နံပါတ်ဝမ်း Dictionary လေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ဆော့ဝဲလေး ကိုတော့ အင်္ဂလိပ် စာကို ချစ်မြတ်နိုး သူတွေ အတွက် သင်သွား လေရာကို ပါ
တဲ့ သင့် စမတ်ဖုန်းလေးနဲ့ အတူ လုံးဝဆောင် ထားသင့် ပါတယ်။ အထူး စိတ်ဝင် စားစရာ
ကောင်းတာ ကတော့ ဒီဆော့ဝဲ လေးကို www.amazon.com မှာတောင် Price: $29.99 နဲ့
ရောင်းပေး နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့် အတွက် ဒီ Dictionary လေးဟာ vocabulary အတွက်လည်း အထောက် အကူ ဖြစ်
အောင် images ဖြင့်လည်း တွဲစပ် ပေးထားတော့ သေချာ ပါတယ် သင် လိုအပ် နေတဲ့
fluency Skill ကို ဒီ Apk လေးက လုံးဝ အထောက် အကူ ပြု ပေးပြီး နေ့ချင်း တိုးတက် မှု
ကို ပေးစွမ်း နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံး လိုတဲ့ ညီအကိုတွေ ကတော့ အောက်က လင့်များမှာ Free Apk အနေဖြင့် စိတ်
ကြိုက် ဒေါင်းလော့ ရယူနိုင် ပါပြီ။
-anative, dedicated dictionary app written specifically for the Android platform
- hyperlinked cross-references
- wildcard pattern searches with * ?
- integrated entry menus for quick navigation
- offline use (except for audio and images)
24.4 MB ပဲရှိပါတယ်။
2.2 အထက် ဖုန်းအားလုံးမှာ အဆင်ပြေပါတယ်။
▼ usersfiles.com ▼ OR ▼ userscloud.com ▼ OR ▼ solidfiles.com ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, February 25, 20153comments:
ကဏ္ဍ Android, Dictionary
Android ဖုန်း Tablet ကိုင်ထားသော ဘော်ဒါတို့ အတွက် Oxford Advanced Learner's A-Z
Dictionary ဆိုတဲ့ apk လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်းလေးကတော့ အင်္ဂလိပ်စာ
လေ့လာ လိုသူများ အတွက်ပါ။
နောက်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ နေစဉ် အသုံးပြုနေတဲ့ ဘော်ဒါတို့ အတွက်ရော နောက်တခြားသော
လိုချင် သူများအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Current Version : 4.1.34
▼ play.google.com ▼ OR ▼ 1mobile.com ▼ OR ▼ apkshare.org ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, February 19, 2015 No comments:
StarDict Dictionary ကို Ubuntu မှာ Install လုပ်မယ်
Ubuntu ကို သုံးနေရင်းနဲ့ Education ဖက်ကိုပါ စဉ်းစား မိတယ်။ Internet ပေါ်မှာ စာတွေ ဖတ်ရင်
English လို ဖတ်ရတာ များတာ ကလည်း တစ်ကြောင်း ပါတာပေါ့ဗျာ။
ABCD ကိုသိတယ် ဆိုပေမယ့် လည်း ကိုယ့်ဘာသာ စကား မဟုတ်တော့ အခက်တွေ့ တာပဲလေ။
အဲဒီမှာ Dictionary က လိုလာပြီလေ။
Windows မှာ တုန်းကတော့ Dictionary တွေက ပေါတယ်လေ။ Ubuntu မှာ Dictionary က နဲနဲ
ရှားတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့ StarDict တို့ GoldenDict တို့ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်း
တယ် မကောင်းဘူးဆိုတာထက် လက်တွေ့အသုံးဝင်တာပဲလုပ်ကြရအောင်ပါ။
ကျနော်ကတော့ StarDict ကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်။ကဲ ဒါဆို StarDict ကို Install လုပ်လိုက်ကြရ
အောင်ဗျာ။Terminal ကနေသွင်းမနေတော့ပါဘူး။ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ Software Center ကနေ
သွင်းပါမယ်။ SC ကိုဖွင့်ပြီးရင် stardict လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာလိုက်ရင် အောက်ကလိုတွေ့ရမှာပါ။
StarDict ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် More Info နဲ့ Install ဆိုတဲ့ Button တွေ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်က StarDict ကို Install လုပ်ပြီးသား ဆိုတော့ Remove ဆိုပြီး ပေါ်နေ တာပါ။ Install
လုပ်တော့မှာ ဆိုရင်တော့ Install ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် MoreInfo ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ရှင်းလင်း
ချက်အကျဉ်းကို လေ့လာချင်လေ့လာလို့ရပါသေးတယ် Version, Total size စတာတွေ ပေါ့ဗျာ။
Size သိတော့ Download ဘယ်လောက် ကြာကြာ လုပ်ရ မလဲခန့်မှန်းလို့ ရတာပေါ့ ။
Installation ပြီးသွား ရင်တော့ Installed ဆိုပြီး အောက်က အတိုင်းပြပါလိမ့်မယ်။
Installation ပြီးသွားပေမယ့်Dictionary တွေ မပါသေး ဘူးဗျ။ StarDict ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်ခြေ
ဘယ်ဘက်ဒေါင့်မှာ ခွေးသွားစိတ်ပုံ icon လးကိုနှိပ်လိုက်ပါ Manage Dictionaries ဆိုတဲ့ windows
ပွင့်လာ ပါလိမ့်မယ် Dictionaries တွေ Download လုပ်နိုင်မယ့် link ကိုတွေ့ရမှာပါ။
http://stardict.sourceforge.net/ ကနေပြီးတော့ Dictionaries တွေတော်တော် များများ ကို Down
load လုပ်နိုင်ပါတယ် tar.bz2 အမျိုး အစားတွေပါ (zip တို့ rar တို့လို file Type ပါပဲ) ကျနော် Down
ထားတာတောင် English - English တွေတင် Dictionaries (၆၀) လောက် ရှိပါတယ်။
ကဲဗျာ.. ဒေါင်းပြီး သွားပြီပဲ ထားလိုက် ပါတော့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ ExampleDictionary.tar.bz2 ဖိုင်ကို
Extract လုပ်ပြီးဖြည်ထုတ် လိုက်ပါ ExampleDictionary ဆိုပြီး Folder တစ်ခု ရလာ ပါလိမ့်မယ်။
Alt + F2 နှိပ်ပြီး gksu nautilus ဆိုတဲ့ command လေး ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
Password တောင်းပါလိမ့်မယ်။ ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ အောက်ကလို window တစ်ခု ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
File System => user => share => stardict => dic အထိ အဆင့်ဆင့် ဝင်သွား လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ခုနက
Extract လုပ်ပြီးသား ExampleDictionary ဆိုတဲ့ Folder ကို copy & paste လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် window ကို ပိတ်လိုက်ရင် ရပါပြီ ။
OK! ခင်ဗျားရဲ့ StarDict ကို Dictionary တွေ စုံစုံ လင်လင်နဲ့ စတင် အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ။
English-Myanmar Dictionary သုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ornagai-stardict_1.0.0-1_all.deb ဆိုတဲ့
debian file လေးကို https://www.dropbox.com ကနေပြီး down ယူလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Double Click နှိပ်ပြီး SC ကနေ Installation လုပ်ချင်လုပ် CLI ကနေပဲ sudo dpkg -i ornagai-stardict_1.0.0-1_all.deb ဆိုပြီး တော့ installation လုပ်လုပ် ခင်ဗျား သဘောပါပဲ။
Internet ကနေပြီး ခင်ဗျားရဲ့ လေ့လာမှုတွေ အတွက် ဒါဆိုကောင်းကောင်း အထောက်အပံ့ဖြစ်ပြီ
လို့ ထင်ပါတယ်။ စကားလုံး တစ်လုံးရဲ့ Definition ကို Dictionariy ပေါင်းစုံ ကနေ လေ့လာရင်း
အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ကြ ပါစေဗျာ..........။
Credit to X Magic World
From ; Myanmar IT Knowledge by Aung Ko Htet
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, February 03, 20153comments:
ကဏ္ဍ Dictionary, Linux
English-Myanmar Dictionary အသစ်လေးပါ
English-Myanmar Dictionary အသစ်လေးပါ.။ ဒီကောင်လေး ထဲမှာ .. ကိုယ်လေ့လာ ချင်တဲ့ စာလုံး တွေကို
အလွယ် တကူ ရှာဖွေ နိုင်ပါတယ်..။
ဒါ့အပြင် စာလုံး အသစ်တွေ ထပ်ထည့် ထားလို့ ရပါတယ်..။အင်္ဂလိပ် စကားပြော လေးတွေ ကိုလည်း လေ့လာ
နိုင် ပါသေးတယ်.။ တော်တော်လေး စုံစုံလင်လင် အသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်လို့ ..ဆောင်ထား သင့်တဲ့ apkလေးတစ်ခု
▼ usersfiles.com ▼ OR ▼ userscloud.com ▼
Credit: Naing Group
Ornagai မြန်မာ Dictionary
Android Phone သမားတွေ အတွက် သုံးလို့ကောင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ Dictionary လေး တင်ပေးလိုက်
သိချင်တဲ့ စာလုံး တစ်ခုကို ရိုက်ရှာ လိုက်တာနဲ့ နီးစပ်တာတွေပါ အကုန်ဖော်ပြပေးပါတယ်။
- Only Support Voice for english words.
Shwebook Dictionary Pro v3.5.2 App for Android
မိမိတို့ အသုံးပြု​နေတဲ့ Android ဖုန်း​လေး ထဲက​နေပြီး Dictionary အသုံးပြုလို့ ရမယ့်​ Application ​လေးဖြစ်
​ပါတယ်​။ ကိုယ်​သိလို တဲ့ စကားလုံး အ​ကြောင်းအရာများကို English လိုပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊Myanmar လိုပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ဒီ
app ​လေးကို အသုံးပြုပြီး လွယ်​လင့်​တကူ ရှာ​ဖွေကြည့်​ရှုနိုင်​မှာပါ။
Words ​ပေါင်း 50,000 ​ကျော်​ကို offline အ​နေနဲ့ ရှာ​ဖွေ​ပေး မှာပါ။
ပြီး​တော့ Chinese တရုတ်​ဘာသာ စကားကိုလည်း Translate လုပ်​​ပေးနိုင်​ပါတယ်​။ အ​ကြောင်း အရာ​တွေကို
ရှာ​ဖွေနိုင်​ရုံတင်​မကဘဲ၊ဘာသာစကား ​တွေကိုလည်း အသံထွက်​ကိုပါ နားဆင်​လို့ရ​စေတာဟာလည်း ကောင်း
မွန်​ပြည့်​စုံတဲ့အချက်​တစ်​ချက်​လို့ဆိုရမှာပါပဲ။Chinese ဘာသာစကားကိုပါ အသံထွက်​ပြန်​ဆို​ပေးနိုင်​ပါတယ်​။
Chinese အသံထွက်​ ကို နား​ထောင်​ချင်​ရင်​​တော့ အင်​တာနက်​ တချက်​ဖွင့်​ လိုက်​ဖို့​တော့ လိုပါတယ်။​
Eng:to Myanmar /Myanmar to English က​တော့ လိုင်းဖွင့်​ဖို့ မလိုပါဘူး (off line) အသုံးပြုနိုင်​ပါတယ်​။
အဲ့ဒိ​တော့ကာ ဒီ application ​လေးကို
English,Myanmar,Chinese သုံးဘာသာ Dictionary App လို့​ခေါ်ရမှာပါပဲ။
ကိုယ်​ရှာ​ဖွေထားတဲ့ Words ​တွေကိုလည်း History ထဲမှာ ပြန်​ရှာကြည့်​နိုင်​ပါတယ်​။
shwebook ဆိုဒ်​က news ​တွေကိုလည်း ဒီ app က​နေ ဝင်​​ရောက်​ကြည့်​ရှုနိုင်​ပါတယ်​။
ဒီ app က​နေ latest update ​တွေလုပ်​​ဆောင်​နိုင်​ပါတယ်​။
ဒီ application ကို ​ရေးသားသူက​တော့ မြန်​မာ Developer ဖြစ်​သူ"Ko Kyaw Kyaw" ပဲဖြစ်​ပါတယ်​။
Apk File Size 5.8MB ရှိပြီး Android OS Version 2.3 နှင့်​ အထက်​ ရှိထား​သော ဖုန်းများမှာ ထည့်​သွင်း
install နိုင်​ပြီး အသုံးပြု လို့ရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​
From : Pyae Phyo (MMiTD) by ကိုဇော် သွင်
Shwebook Dictionary Pro v3.3.0 App for Android
မိမိတို့ အသုံးပြု​ aနတဲ့ Android ဖုန်း​လေး ထဲ က​နေပြီး Dictionary အသုံး ပြုလို့ ရမယ့်​ Application ​လေး ဖြစ်​ပါတယ်​။ ကိုယ်​သိလို တဲ့ စကား လုံး အ​ကြောင်း အရာ များကို English လိုပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​၊ Myanmar လိုပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ ဒီ app ​လေးကို အသုံးပြုပြီး လွယ်​လင့်​ တကူ ရှာ​ဖွေ ကြည့်​ရှု နိုင်​မှာပါ။
Words ​ပေါင်း 50,000 ​ကျော်​ ကို offline အ​နေနဲ့ ရှာ​ဖွေ​ပေး မှာပါ။ ပြီး​တော့ Chinese တရုတ် ​ဘာသာ စကား ကိုလည်း Translate လုပ်​​ပေး နိုင်​ပါတယ်​။ အ​ကြောင်း အရာ​ တွေကို ရှာ​ဖွေ နိုင်​ရုံတင်​ မကဘဲ၊ ဘာသာ စကား ​တွေ ကိုလည်း အသံထွက်​ ကိုပါ နားဆင်​လို့ ရ​စေတာ ဟာလည်း ​
ကောင်းမွန်​ ပြည့်​စုံတဲ့ အချက် ​တစ်​ချက်​လို့ ဆိုရ မှာပါပဲ။
Chinese ဘာသာ စကား ကိုပါ အသံထွက်​ ပြန်​ဆို​ ပေးနိုင်​ ပါတယ်​။Chinese အသံထွက်​ ကို နား​ထောင် ​ချင်​ရင်​​တော့ အင်​တာနက်​ တချက် ​ဖွင့်​လိုက်​ဖို့​တော့ လိုပါတယ်​။ Eng:to Myanmar /Myanmar to English က​တော့ လိုင်းဖွင့်​ဖို့ မလိုပါဘူး (off line) အသုံးပြု နိုင်​ပါတယ်​။
အဲ့ဒီတော့ ကာ ဒီ application ​လေးကို English,Myanmar,Chinese သုံး ဘာသာ Dictionary App လို့​ ခေါ်ရ မှာပါပဲ။ ကိုယ် ​ရှာ​ဖွေ ထားတဲ့ Words ​တွေ ကိုလည်း History ထဲမှာ ပြန်​ရှာ ကြည့်​နိုင်​ ပါတယ်​။ shwebook ဆိုဒ်​က news ​တွေ ကိုလည်း ဒီ app က​နေ ဝင်​​ရောက် ​ကြည့်​ရှု နိုင်​ပါတယ်​။
ဒီ app က​နေ latest update ​တွေ လုပ်​​ဆောင်​ နိုင်​ပါတယ်​။
ဒီ application ကို ​ရေးသား သူ က​တော့ မြန်​မာ Developer ဖြစ်​သူ "Ko Kyaw Kyaw" ပဲ ဖြစ်​ ပါတယ်​။
Apk File Size 4.6MB ရှိပြီး Android OS Version 2.2 နှင့်​ အထက်​ ရှိ ထား​သော ဖုန်းများ မှာ ထည့်​သွင်း install နိုင်​ပြီး အသုံး ပြု လို့ ရမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​
-​အောက်​ကလင့်​မှာ​ ဒေါင်းလုပ် ​ရယူနိုင်​ ပါပြီ။
From: Internet for Myanmar by ကိုဇော် သွင်
မြန်မာလို ပါဝင်တဲ့ Dictionary Offline - 2
ဒီကောင်လေး ကတော့ ဘာသာ စကား များစွာကို translation လုပ်ပေး နိုင်တဲ့ Offline dictionary လေး ပါပဲ။
SD card ထဲ ထည့်ပြီး အင်စတော လုပ်ပြီး တာနဲ့ (works offline!) အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ။
ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတွေ ကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
English – Burmese လည်း ပါဝင် တာကြောင့် အားလုံး ကြိုက်ကြ မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Android : 2.3 နှင့် အထက်က စပြီး အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
* English – Swahili * English – Swedish
မြန်မာလို ပါဝင်တဲ့ Dictionary Offline
downloadmm Play Store